Pinos dagbok - somaliska: Doktor Pino - UR Skola
Kani waa Biino.
Maanta Biino waa dhakhtar.
Dad badan baa fadhiya qolka sugidda.
Binolina jilibkaa xanuunaya.
Biino wuxu Binolina jilibka
ugu duubay faashad.
Kan ku xiga.
Bisadii jidhka oo dhan
waxaa kasoo baxay dhibco.
Biino bisadii wuxuu siiyay dhiiqo.
Bingfinki cunahaa xanuunaya.
Afka kala qaad ayuu yidhi Biino.
Biino Bingfinen buu dhegeysanayaa.
Bingfinka waxaa la siiyey dawada
Bingfinku waa inuu jiifsado.
Haye, kan ku xiga.
Bakaylaha waxaa xanuunaysa cagta.
Bakaylihi irbad baa lugta
Bakaylahu wuu faraxsanyahay.
Hada wuu bood boodi karaa.
Caruusada fartaa xanuunaysa.
Biino fartii buu u afuufayaa.
Wakaa, haddu xanuunku ka ba'ayaa.
Hada fadhigu wuu madhanyahay.
Hada dhamaan way caafimaad qabaan.